कहाँ पुग्यो चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन ? - Sudur Khabar
कहाँ पुग्यो चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयन ?
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७५, सोमबार ०६:४७
बैशाख ३ – उत्तरी छिमेकी चीनले दुईदेशीय रेलमार्ग निर्माणसहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भए पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । विगतमा भएका थुप्रै सम्झौता र समझदारी अलपत्र छन् । यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सोमबार चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा भएको पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ ले पनि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा चिनियाँ पक्षले चासो देखाए पनि यसले पनि अझै अन्तिम रूप पाएको छैन । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
चीनसँग भएका रेलमार्ग, आर्थिक सहकार्यलगायत सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन तहमै पुग्न नसकेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणले अर्थपूर्ण छलफल गर्ने अपेक्षा परराष्ट्र अधिकारीले गरेका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादन क्षमता वृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयको प्रोटोकल भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले आफ्नातर्फबाट काम सकेर नेपालसमक्ष धारणा राखिसकेको छ । त्यसमा नेपालले अध्ययन गरिरहेको बताइए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
चार वर्षयता नेपालमा ६ जना प्रधानमन्त्री फेरिइसके तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा हुने दुईपक्षीय छलफललाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । उनको भ्रमण दुईपक्षीय सहकार्य सघन बनाउने र उच्चस्तरको भ्रमणमा जोड दिन केन्द्रित हुने जानकारी परराष्ट्र अधिकारीले दिएका छन् । मन्त्रालयले ज्ञवालीको भ्रमणलाई ‘सद्भावना’ भनेको छ । नेपाल र चीनबीचका कतिपय काम गौंडागौंडामा रोकिने गरेको अनुभव छ ।